Oceania နိုင်ငံများ | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | လမ်းပြ, Oceania
ကမ္ဘာကြီးကိုပထဝီအနေအထားအလိုက်ခွဲခြားထားပြီး၎င်းတို့အနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် Oceania။ ဒီဒေသထဲမှာတိုးချဲ့ နှစ် ဦး စလုံး hemisphere လူ ၄၁ သန်းခန့်နေထိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်နှစ်ယောက်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားနေရာတွေဖုံးကွယ်ထားတယ်၊ ဘယ်ယဉ်ကျေးမှုတွေပေါ်ပေါက်လာတာလဲ။
သမုဒ္ဒရာသည်အလွန်သေးငယ်ပြီးမတူကွဲပြားသည့်ဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အလွန်ဖွံ့ဖြိုးပြီးစီးပွားရေးနှင့်အခြားအလွန်ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများပါဝင်သည်။ ထို့နောက်သြစတြီးယားသို့မဟုတ်နယူးဇီလန်တို့သည် Vanuatu, Fiji or Tonga တို့နှင့်အတူတကွယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြသည်။ ၁၄ နိုင်ငံသည်သမုဒ္ဒရာကိုထူထောင်သောနိုင်ငံများဖြစ်သည် ဒီနေ့သူတို့ဘာတွေကမ်းလှမ်းတယ်ဆိုတာသိတော့မယ်။
2 Oceania နိုင်ငံများ
မူလက Oceania ၏လူ ဦး ရေ 60 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထိုဒေသသို့ရောက်ရှိလာခဲ့နှင့် ဥရောပသားတွေက ၁၆ ရာစုမှာပဲလုပ်ခဲ့တာစူးစမ်းရှာဖွေသူများနှင့်ရေကြောင်းပြသူများအဖြစ်။ ပထမ ဦး ဆုံးအဖြူအခြေချနေထိုင်သူများသည်နောက်ရာစုနှစ်များအတွင်းအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။
Oceania သြစတြေးလျ၊ မယ်လနီးရှား၊ မိုက်ကရိုနီးရှားနှင့်ပိုလီနီးရှားတို့ပါဝင်သည်။ Micronesia တွင် Mariana ကျွန်းများ၊ Carolinas၊ မာရှယ်ကျွန်းများနှင့် Kiribati ကျွန်းများရှိသည်။ Melanesia တွင် New Guinea၊ Bismarck Archipelago၊ Solomon Islands, Vanuatu, Fiji နှင့် New Caledonia တို့ရှိသည်။ ပိုလင်နီးရှားသည်ဟာဝိုင်ယီမှနယူးဇီလန်အထိကျယ်ပြန့်သည်။ တူဗာလူ၊ တိုကလောင်၊ ဆာမိုအာ၊ တွန်ဂါ၊
အများဆုံး Oceania ပါဝင်သောကျွန်းများသည်ပစိဖိတ်ပန်းကန်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအောက်တွင်တည်ရှိသည့်သမုဒ္ဒရာမဟာဗျူဟာကျသောကျောက်ပြား။ သြစတြေးလျသည်အင်ဒို - Australianစတြေးလျပန်းကန်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်သက်တမ်းအရင့်ဆုံးသောမြေထုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အလယ်အလတ်တွင်ရှိပြီးမီးတောင်လှုပ်ရှားမှုမရှိပါ။ ၎င်းသည်နယူးဇီလန်နှင့်သူတို့၏မီးတောင်များကြောင့်လူသိများသောအခြားကျွန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။
Oceania ၏သစ်ပင်ပန်းမန်သည်အဘယ်နည်း။ အလွန်ကွဲပြားခြားနားသို့သော်ဤမတူကွဲပြားမှုသည်Australiaရိယာတစ်ခုလုံးတွင်မဟုတ်ဘဲသြစတြေးလျတွင်ဖြစ်သည်။ ,စတြေးလျတွင်မိုးသစ်တောများ၊ တောင်များ၊ ကမ်းခြေများ၊ သဘာ ၀ ရှုခင်းများနှင့်သဲကန္တာရများရှိသည်။ အတူတူပါပဲသတ္တဝါ။
Oceania ရာသီဥတုဘယ်လိုလဲ ကောင်းပြီ, ပစိဖိတ်ကျွန်းများအတွက်မဟုတ်ဘဲဖြစ်ပါတယ် အပူပိုင်းဒေသမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းနှင့်ဆိုင်ကလုန်းများဖြစ်ပေါ်သည်။ အခြားအစိတ်အပိုင်းများတွင်သြစတြေးလျပိုင်နက်နယ်မြေ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းသည်သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာနှင့်မြေထဲပင်လယ်ရာသီဥတုနှင့်အတူသဲကန္တာရမျှသာဖြစ်သည်။ တောင်ပေါ်မှာတောင်မှနှင်းကျသည်။
သတိပြုသင့်သည်မှာနယူးဇီလန်နှင့်အီစတာကျွန်း မှလွဲ၍ ပစိဖိတ်ကျွန်းများအများစုသည်ထိုဒေသတွင်တည်ရှိသည်။ အပူပိုင်းဒေသအလယ်နှင့်အီကွေတာအလယ်၌ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာရာသီပေါ် မူတည်၍ အပူချိန်ကွာခြားမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။
အစအ ဦး ၌ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည်မှာ Oceania တွင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများဖြစ်သည်။ က) ဟုတ်တယ်၊ သြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်တို့သည်တစ်ခုတည်းသောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည် သို့သော်သြစတြေးလျနိုင်ငံသည်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများထက် ပို၍ ကြီးမားပြီးအားကောင်းသောစီးပွားရေးရှိသည်။ ဝင်ပေါက် လူတစ်ဦးချင်းစီ ဥပမာအားဖြင့်ဤတိုင်းပြည်သည်ကနေဒါသို့မဟုတ်ပြင်သစ်နိုင်ငံများနှင့်တန်းတူဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း၏စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်သည်တောင်ပစိဖိတ်ဒေသတွင်အကြီးမားဆုံးအလေးချိန်ဖြစ်သည်။
ဤအတောအတွင်း နယူးဇီလန်သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးရှိသည် ၎င်းသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုအပေါ်များစွာမူတည်သည်။ နှစ်နိုင်ငံစလုံး၏လူ ဦး ရေသည်များသောအားဖြင့်လျှပ်စစ်စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်သတ္ထုတူးဖော်ခြင်းတို့မှနေထိုင်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ကော ပစိဖိတ်ကျွန်းများ? ဤတွင်လူအများစုသည် ၀ န်ဆောင်မှုနယ်ပယ်တွင်အထူးသဖြင့်ငွေကြေးနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများတွင်လုပ်ကိုင်ကြသည်။
ကျွန်းများ သစ်သား၊ အသား၊ အုန်းဆီ၊ ကိုကိုး၊ သကြား၊အခြားထုတ်ကုန်များအနက်သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ အာရှပစိဖိတ်နိုင်ငံများနှင့်နီးကပ်စွာစီးပွားဖြစ်ဆက်ဆံမှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဆိုပါတယ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်ကြယ်ဖြစ်သည် ဒီမှာလှည့်ပတ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Oceania ရှိကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်အများစုမှာအမေရိကန်၊ ယူကေနှင့်ဂျပန်မှဖြစ်သည်။ အများဆုံးလည်ပတ်ခဲ့သောနိုင်ငံများWTO ၏အဆိုအရကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏အဆိုအရ ၎င်းတို့မှာသြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်နှင့်ဂူအမ်တို့ဖြစ်ကြသည်။
သြစတြေးလျသည်နိုင်ငံတကာခရီးသွား destination ည့်သည်အနေဖြင့်ဆစ်ဒနီဆိပ်ကမ်းနှင့် Opera House၊ Gold Coast၊ Tasmania၊ Great Barrier Reef သို့မဟုတ် Victoria ၏ကမ်းခြေသို့လာရောက်လည်ပတ်သူတစ်နှစ်လျှင် 8 ည့်သည် ၈ သန်းခန့်ရှိသည်။ အေရာစ်ရော့ခ်ဥပမာသည်။
နယူးဇီလန်နိုင်ငံသည်လူကြိုက်များသောနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်၎င်း၏ရှုခင်းများသည်လူကြိုက်များသော Lord of the Rings trilogy အတွက်နေရာဖြစ်သည်။ ဟာဝိုင်ယီကျွန်းများသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးလူကြိုက်များသောကြောင့်သူတို့၏ကမ်းခြေများ၊ မီးတောင်များ၊ အမျိုးသားဥယျာဉ်များဖြစ်သည်။
အမှန်တရားမှာ အကယ်၍ ဒေသသည်နိုင်ငံ ၁၄ နိုင်ငံပါ ၀ င်လျှင်၎င်းတို့အားလုံးကိုတစ်ခေါက်တည်းဖြင့်ခရီးသွားရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်ဥရောပနှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောနေရာတစ်ခုကိုလေ့လာလိုပါကသင်သွားမည်ကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည် ယဉ်ကျေးမှုများစွာ၊ ရှုခင်းများစွာ၊ ဘာသာစကားများစွာ၊။ ပိုက်ဆံတွေနဲ့အထူးသဖြင့်areaရိယာတခုခုမှာရှိတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘောကိုပိုက်ဆံနဲ့အလွယ်တကူသွားနိုင်ပြီးနေရာအမျိုးမျိုးမှာသွားလည်နိုင်ပါတယ်။ ငွေမရှိဘဲသင့်ရဲ့ပခုံးပေါ်ကကျောပိုးအိတ်နဲ့အတူနေရာတွေဟာပိုသေးလာပြီးအစီအစဉ်ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။
ဒါပေမယ့်အခြေခံအားဖြင့်ဒီနေ့ခေတ် Oceania သည်စုံတွဲများ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုများအတွက်ရေပန်းစားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် ကမ်းခြေ, နေရာများရှာဖွေနေသည် ရေငုပ်သို့မဟုတ် snorkelရေလှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုး၊ အဏ္ဏဝါတိရိစ္ဆာန်များ၊ သန္တာကျောက်တန်းများကိုတွေ့မြင်ရခြင်း၊ စိတ်မပူတတ်သော သူတို့ဒီမှာလှည့်ပတ်ပြောသကဲ့သို့။
ခရီးသွား by ည့်သည်များမကြာခဏသွားလေ့ရှိသည့်နေရာများမှာပြင်သစ်ပိုလီနီးရှားဖြစ်သည်။ ကျွန်းတစ်ရာကျော်နှင့် ဖီဂျီတစ်နည်းအားဖြင့်ကျွန်းပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ပါဝင်သည်။ ဒီမှာဘာမှစျေးပေါသည်။ ကောင်လေးကသူတို့နှင့်အတူလှပသောနေရာများဖြစ်ကြသည် Maui, Bora Bora... သင်သြစတြေးလျသို့သင်၏ခရီးကိုစတင်နိုင်ပြီးထိုအရပ်မှအခြားနေရာများသို့ခုန်ကူးနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်သို့မဟုတ်ပစိဖိတ်ကျွန်းကြီးများကိုသာအာရုံစိုက်နိုင်သည်။ မင်းသွားချင်တဲ့နေရာကိုမြေပုံဆွဲပြီးကောင်းကောင်းရေးဆွဲရမယ်။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲအိုစီနီးယားတစ်နိုင်ငံလုံးခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးကိုဖုံးအုပ်လို့မရဘူး။
ခေတ်သစ်မြို့ကြီးတွေကိုလိုချင်ပါသလား သြစတြေးလျသို့မဟုတ်နယူးဇီလန်သို့ ဦး တည်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသန္တာကျောက်တန်းတွေလိုချင်လား သြစတြေးလျရှိ Great Barrier Reef သည်သင်၏လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရှိသည်။ တိတ်ဆိတ်ပြီးရှေးခေတ်ကျွန်းယဉ်ကျေးမှုအလယ်မှာအိပ်မက်ကမ်းခြေကိုလိုချင်ပါသလား။ ကောင်းပြီ, ပိုလီနီးရှားနှင့်ဖီဂျီ။ သွေဖည်နေသောလူအုပ်နှင့်ဝေးဝေးနေချင်ပါသလား။ Kiribati, Samoa နှင့်စာရင်းအပေါ်ဆက်လက်။ ကောင်းမွန်သောခရီးစဉ်!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Oceania » Oceania နိုင်ငံများ